Muxuu Jawaari ka yiri mashaqadii shalay ku qabsatay baarlamanka? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Gudoomiyaha Baarlamaanka Federalka Somaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa xalay uu ujeediyey shacabka Soomaaliyeed uga hadlay fowdadii shalay ka dhacday baarlamaanka Soomaaliya.
Prof. Jawaari ayaa marka hore waxa uu shacabka Soomaliyeed ku wargeliyay in dalku uu lee yahay baarlamaan awood u leh inuu maareeyo siyaasada dalka lagu hagaayo.
“Waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa in dalku leeyahay baarlamaan awood leh, mana aha mid si fudud lagu furfuri karo” ayuu yiri Jawaari.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa hoosta ka xariiqay in Xildhibaanada Baarlamaanka ku mideysan yihiin in dalka xasilooni siyaasadeed lagu maamulo, midnimada la raadsho iyo hiigsiga 2016-ka, ay Somaliya gaarsiiyaan.
“Xildhibaanadu waa kuwa qiiro badan, mana ku imaan qaab dheeldheel ah, arrintii ka dhacday baarlamaanka waa mid caadi ah oo ka dhacda baarlamaanada dunida, labada dhinac aragti ayay ku kala duwan yihiin ee ujeedada kuma kala duwana, ee shacabku ha kalsoonaado baarlamaanka, xumaana yaan loo arkin” ayuu sidoo kale Jawaari ku qanciyey shacabka.
Jawaraai wuxuu xusay in baarlamaanku uu leeyahay Xeer Hooseedyo, cid kastaa oo ku geftaana la marinaayo waxa uu ka qabo, si adagna loo Maamuli doono, isla-markaana la dhammeen doono arrimaha Baarlamaanka horyaala.
Kulan uu shalay Muqdisho ku yeeshay baarlamaanka Soomaaliya oo la doonayey in la horgeeyo mooshin ka dhan ah R/wasaare C/weli Sheekh ayaa ku dhamaaday fowdo iyo buuq kadib markii xildhibaanada ku safka ah R/wasaaraha ay buuq sameen.
Daawo sida xildhibaanada Soomaaliya salaanta ugu saaraan dollarka!!!